“Alexander-Arnold wuxuu awood u leeyahay inuu noqdo kan ugu fiican Adduunka” – Cafu – Gool FM
“Alexander-Arnold wuxuu awood u leeyahay inuu noqdo kan ugu fiican Adduunka” – Cafu
(Liverpool) 07 Juun 2020. Halyey reer Brazil ah ayaa daaha ka rogay in daafaca Liverpool ee Trent Alexander-Arnold uu awood u leeyahay inuu noqdo xiddiga ugu fiican Adduunka.
Daafacii hore ee reer Brail Cafu ayaa shaaca ka qaaday in daafaca Liverpool ee Trent Alexander-Arnold maalin uun loo caleemo saari doono ciyaaryahanka ugu fiican Adduunka.
21-sano jirkaan ayaa xubin muhiim ah ka ahaa kooxda Jurgen Klopp tan iyo sanadkii 2018, wuxuuna uu haystaa rikoor Premier League oo ah daafaca inta ugu badan caawin sameeyey xilli ciyaareedkii hore.
Cafu oo u saadaaliyay Alexander-Arnold inuu ku guuleysto abaal-marinta Ballon d’Or mustaqbalka ayaa soo dhoweeyay isbarbardhiga u dhexeeya isaga iyo daafaca Reds, kaasoo uu rumeysan yahay inuu awood u leeyahay inuu noqdo xiddig caan ka ah ciyaarta casriga ah.
“Waa ciyaaryahan saameyn leh, waana hibo dhif ah,” ayuu Cafu u sheegay FIFA.com.
“Haddii uu u sii ciyaaro sida uu u ciyaaro, waxaa loo arki doonaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican Adduunka, wuxuu leeyahay karti uu ugu guuleysto abaal-marinta xiddiga ugu fiican ee [The Best FIFA Men’s Player award].
“Farsamo ahaan waa cajiib, waxaana uu leeyahay tayo badan, waxa uu leeyahay hab ciyaareedka ciyaartoyda reer Brazil, waxaan jeclahay daawashadiisa, inuu koox weyn u ciyaarana wax badan ayay ka caawin doontaa”